Vimba izinhlelo zokusebenza ezifakwe ku-Android kalula | Izindaba zamagajethi
Ungazivimba kanjani izinhlelo zokusebenza ze-Android zedivayisi yethu yeselula
Lapho sinedivayisi yeselula ye-Android (ithebhulethi noma iselula) futhi kungekho noyedwa umuntu oyisebenzisayo, kungahle kungadingeki ukuthi siphathe izinhlelo nezinsiza zomshini, ngoba akekho omunye umuntu ozozama ukufaka indawo lapho kuphela siyazi ukuthi silisebenzisa kahle kanjani.
Kepha kuthiwani uma sinikeza leli thebhulethi ingane eneminyaka engu-10; ziningi izinto ezingenzeka ngalowo mzuzu, enye yezinto ezilimaza kakhulu wonke umuntu, lowo ohamba ngendlela izinhlelo zokusebenza ezinodlame noma ezingalingani ngeminyaka ngendlela yengozi. Kungaleso sikhathi lapho kufanele sicabange ngokusebenzisa ithuluzi elisiza ukuvimba izici ezithile zedivayisi yeselula ye-Android, into esizozinikela ukuyenza kulesi sihloko ngosizo lohlelo lokuphepha.
Iphini enamadijithi angu-4 ukuvikela idivayisi yethu ye-Android
Uhlelo lokusebenza esizoncoma ngalo njengamanje yi- «I-Avast Mobile Security ne-Antivirus«, Kuyafana nokuthi ungayithola ngokuphelele futhi khiya imisebenzi emi-2 yedivayisi yakho yeselula ye-Android, okuthile okwanele uma sisebenzisa lokhu mahhala ngendlela ehlakaniphile, yize kuhlale kunethuba lokuthola inguqulo ekhokhelwayo ukuze sikwazi ukuvimba izinhlelo eziningi nemisebenzi kukhompyutha. Ukuze ube nombono omncane wokuthi yini ongayivimba ngemuva kokuthola leli thuluzi, sizophakamisa lokho abathuthukisi balo abakushilo ngakho:
Vimba ukufinyelela esitolo se-Google sokudlala. Ngalokhu, asigcini ngokuvimba ukufakwa kwezinye izinhlelo zokusebenza ingane engazikhetha ngephutha, kepha futhi nokuthengwa kwezinye zazo uma silungiselele ikhadi lethu lesikweletu kulesi sitolo.
Khiya izilungiselelo zesistimu. Kuyisidingo esikhulu futhi, ngoba omncane kungenzeka ukuthi ulawula indawo yokugcina yedivayisi yethu ephathekayo, into engaba yingozi kithina.
Vikela izinhlelo zethu zokusebenza ezifakiwe. Ngokuvikela okokusebenza kwethu sizovimbela ingane encane noma omunye umuntu ukuthi angafaki izinhlelo zethu esizithandayo esigungwini.
Sikhulume ngezizathu ezi-3 ezibaluleke kakhulu okufanele sizicabangele lapho sivikela idivayisi yethu yeselula ye-Android nge- "Avast Mobile Security & Antivirus", futhi kufanele kube ngumsebenzisi wokugcina ochaza izizathu ezibaluleke kakhulu zokusebenzisa ithuluzi. Lapho sesilande futhi safaka i- "Avast Mobile Security & Antivirus" kuzofanele siyisebenzise kuphela; ngawo lowo mzuzu sizothola isikrini esifana ncamashi naleso esizosibeka ngezansi.
Njengoba ukwazi ukubabaza, ohlangothini lwesobunxele kunezinketho ezimbalwa zokuphepha lolu hlelo lokusebenza olunikeza zona, okumele ukhethe okwamanje lowo othi «Ukukhiya Isicelo; iNgokushesha, uhlu lwazo zonke izinhlelo zokusebenza nemisebenzi enesistimu yethu yokusebenza kanye nesiginali kuzovela, kuphela okumele kubhekwe ibhokisi ngalinye ukuzivikela. Khumbula ukuthi uhlelo lokusebenza lwamahhala luzosivumela ukuvimba okungu-2 kwazo zonke lezi zici, futhi kungaba umqondo omuhle ukukhetha:
Isitolo se-Google Play.
Ukucushwa kohlelo lwethu lokusebenza lwe-Android.
Sizokwenza chaza ukhiye wokuqinisekisa ubunikazi onamadijithi angu-4 njengenye indlela yokuvikela. Lapho sihambisa i-terminal kumuntu ohlukile futhi umuntu ofanayo ufisa ukufaka lezi zindawo ezi-2 esasizivimbe ngaphambilini njengesiphakamiso, iwindi elincane lizovela ngokushesha lapho umsebenzisi azocelwa ukufaka izinombolo ezi-4 zephasiwedi sihlele ngaphambilini.
Uma nje lo khiye ungafakiwe, noma yiluphi uhlobo lohlelo lokusebenza noma umsebenzi esiwuvikele kulolu hlelo luzovulwa.
Manje, ithuluzi lisinikeza izici ezimbalwa ezingeziwe ngaphakathi kokumiswa kokuphepha, ngenxa yokuthi umsebenzisi wokugcina angachaza, ngekhalenda elincane, izinsuku nesikhathi sokuphela (kusuka esikhathini esithile kuya kwesinye isikhathi) lapho kuzosetshenziswa khona le ndlela yokuvikela. Akungabazeki, lo ngumsebenzi obaluleke kakhulu ongawusebenzisa ngokunenzuzo, ngoba uma izingane zisebenzisa i-terminal yethu ngempelasonto (noma ebusuku), kufanele simane siyihlele ukuze kucelwe ukhiye wokuvula ngalezo zikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungazivimba kanjani izinhlelo zokusebenza ze-Android zedivayisi yethu yeselula
Ungasishintsha kanjani isikhombisi segundane kuWindows 7
Ungalanda futhi ufake kanjani isiqalisi se-Z kudivayisi yethu ye-Android